FIANAKAVIANA DIA MPISOLOVAVA
Fa dia nahoana izy ireo no afaka miaro ny zony amin’ny fitsarana
Satria mpahay lalàna za-draharaha mahafantatra fa tsy ara-dalàna ihany no fepetra, nefa koa fomba fanatanterahana ny tari-dalana ny fizotry ny tantara.
Ka raha Ianao no eo amin’ny fiainana sarotra ny toe-javatra mifandray amin’ny fanapahan-kevitra ireo, na fianakaviana hafa ady, azafady mifandraisa amin’ny mahay fanohanana ara-dalàna ho amin’ny tranonkala. Ianao dia ho afaka mangataka ny mpahay lalàna momba izay lafiny liana amin’ny fianakaviana olana, ary koa mba hisafidy ny tsara ny mpisolovava izay dia tsy misolo tena Ny tombontsoan’ny amin’ny fitsarana, nefa manampy koa mba hanao fitarainana, hanangona ny ilaina rehetra ny fitsarana ireo antontan-taratasy sy hifidy ny marina mazava ho azy fa ny asa amin’ny fitsarana.
Raha te hiaro ny tombontsoany amin’ny vahaolana ny sarotra fianakaviana olana, mba tsy hiharan’ny kokoa ny fahaverezam-bola tao ny fisaraham-panambadiana, avelao ny ankizy na ny miaro ny tenany amin’ny fandrahonana sy fanohintohinana ny vady, dia tokony hampiasa ny tolotra iray za-draharaha mpahay lalàna miara-miasa amin’ny fianakaviana lalàna manan-danja.
Eo amin’ny toerana afaka mahazo toro-hevitra manam-pahaizana manokana na inona na inona mikasika ny fianakaviana ny olana, mba hamaky ny mahaliana mpanoratra ny boky sy gazety sy vaovao, mba tena haingana hahita za-draharaha mpisolovava izay maneho Ny zavatra mahaliana ao amin’ny fitsarana.
Amin’ny toe-javatra ireo dia mitaky foana miasa fanampiana
Eo amin’ny tranonkala Ianao dia afaka mahita ny fanohanana ny za-draharaha ny mpisolovava izay hanampy hiarovana Ny zon’olombelona eo amin’ny fanapahan-kevitra ny fianakaviana ny fifandirana
TOROHEVITRA ARAKA NY LALÀNA AMIN'NY ALALAN'NY FINDAY HO MAIMAIM-POANA